Olee otu Englọ Ọrụ Nchọgharị Na-achọta, Crawl, na Index ọdịnaya gị? | Martech Zone
Kedụ ka igwe ọrụ nchọta na-achọta, nraranye, na Index ọdịnaya gị?
Anaghị m atụ aro ka ndị ahịa wulite ecommerce nke ha ma ọ bụ sistemụ njikwa ọdịnaya n'ihi nhọrọ nhọrọ nnabata a na-adịghị ahụ anya nke dị mkpa n'oge a - na-elekwasị anya na nyocha na njikarịcha mmekọrịta mmadụ. Edere m otu isiokwu na otu esi ahọrọ CMS m ka na-egosi ụlọ ọrụ ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ ka a na-anwa ha ka ha wuo sistemụ njikwa ọdịnaya nke aka ha.
Agbanyeghị, enwere ọnọdụ ebe ikpo okwu omenala dị mkpa. Mgbe nke ahụ bụ azịza kachasị mma, m ka na-agwa ndị ahịa m ka ha wuo atụmatụ ndị dị mkpa iji bulie saịtị ha maka ọchụchọ na mgbasa ozi mmekọrịta, n'agbanyeghị. Enwere isi ihe atọ dị mkpa.
Kedu ihe Njikwa Robots.txt?
Robots.txt faịlụ - na robots.txt faịlụ a bụ ederede ederede doro anya nke dị na ndekọ mgbọrọgwụ nke saịtị ahụ ma gwa engines ọchụchọ ihe ha kwesịrị ịgụnye ma wepu na nsonaazụ ọchụchọ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, engines ọchụchọ rịọkwara ka ị tinye ụzọ na saịtị XML sitemap n'ime faịlụ ahụ. Nke a bụ otu ihe atụ nke m, nke na-enye ohere bots niile ịwagharị saịtị m ma duga ha na saịtị XML m:
Kedu ihe bụ XML Sitemap?
XML Sitemap - Dịka HTML si ele ihe nchọgharị anya, edepụtara XML ka agbarie ya na mmemme. Ihe ntanetị XML bụ tebụl nke ibe ọ bụla na saịtị gị na mgbe emelitere ya. XML sitemaps nwekwara ike ịbụ daisy-chained… nke ahụ bụ XML Sitemap nwere ike na-ezo aka ọzọ. Nke ahụ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi na imebi ihe nke saịtị gị n'ụzọ ezi uche dị na ya (Ajụjụ, ibe, ngwaahịa, wdg) na saịtị nke ha.
Mapụ Saịtị dị mkpa ka inwee ike mee ka igwe ọchụchọ chọpụta ihe ọdịnaya ị mepụtara na mgbe edeziri ya ikpeazụ. Usoro ọrụ nyocha na-eji mgbe ị na-aga na saịtị gị adịghị arụ ọrụ na-enweghị mmejuputa saịtịmapi na snippets.
Enweghị XML Sitemap, ị na-etinye ihe egwu na ibe gị ka a ghara ịchọta ya. Gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere peeji ọdịda ọhụụ nke ngwaahịa ọhụụ ejikọtaghị ma ọ bụ na mpụga. Kedu ka Google si achọpụta ya? Ọfọn, nanị tinye… ruo mgbe a njikọ na-ahụ ya, ị na-agaghị na-chọpụtara. Obi dị m ụtọ, engines ọchụchọ na-enyere usoro njikwa ọdịnaya na nyiwe ecommerce iji wepụta ha kapeeti uhie, n'agbanyeghị!
Google choputara uzo ozo ma obu nke ozo n’ime saiti gi.
Google na-edepụta peeji ahụ ma debe ya dịka ọdịnaya ya si dị na ihe ọdịnaya na ogo nke saịtị njikọ ahụ bụ.
Iji XML Sitemap, ị naghị ahapụ nchọpụta nke ọdịnaya gị ma ọ bụ mmelite nke ọdịnaya gị na oge! Ọtụtụ ndị mmepe na-anwa ịme ụzọ mkpirisi na-emerụ ha ahụ. Ha na ebiputa otu nkpuru ahihia ahu n'ofe saiti ahu, na enye ozi nke na adighi mkpa na ozi ibe. Ha na-ebipụta saịtị saịtị na otu ụbọchị na ibe ọ bụla (ma ọ bụ ha niile emelitere mgbe mmelite otu peeji), na-enye ndị kwụ n'ahịrị ihe nchọta ọchụchọ na ha na-egwu egwuregwu sistemụ ma ọ bụ enweghị ntụkwasị obi. Ma ọ bụ na ha adịghị ping na search maqbx chekwe na niile… otú ahụ search engine adịghị aghọta na ozi ọhụrụ e bipụtara.
Gịnị bụ Metadata? Microdata? Mpekere Ọgaranya?
A na-eji nlezianya akpado mkpụrụ akụ microdata na-ezo site na onye nkiri ma anya na peeji nke maka search engines ma ọ bụ na-elekọta mmadụ media saịtị na ahu nagide. A maara nke a dị ka metadata. Google kwekọrọ na Schema.org dị ka ọkọlọtọ maka itinye ihe dịka onyonyo, aha, nkọwa… yana plethora nke snippet ndị ọzọ na-enye nkọwa dịka ọnụahịa, ọnụọgụ, ozi ọnọdụ, ọkwa, wdg. Atụmatụ ga-eme ka ọhụhụ ngwa nchọta gị ka ọ doo anya na ọ ga-abụ na onye ọrụ ga-pịa site na.
Facebook na-eji OpenGraph protocol (n'ezie ha enweghị ike ịbụ otu), Twitter nwere snippet ịkọwapụta profaịlụ Twitter gị. Ọtụtụ nyiwe na-eji metadata ahụchalụ njikọ agbakwunyere na ozi ndị ọzọ mgbe ha bipụtara.
Ibe weebụ gị nwere ihe pụtara dị mkpa nke ndị mmadụ na-aghọta mgbe ha gụrụ ibe weebụ. Mana igwe ihe nchọta nwere nghọta pere mpe nke ihe a na-atụle na peeji ndị ahụ. Site na ịtinye mkpado ndị ọzọ na HTML nke ibe weebụ gị-mkpado ndị na-ekwu, "Hey search engine, ozi a na-akọwa ihe nkiri a, ma ọ bụ ebe, ma ọ bụ mmadụ, ma ọ bụ vidiyo a kapịrị ọnụ" -ị nwere ike inyere engines na ngwa ndị ọzọ aka ịghọta ọdịnaya gị nke ọma. ma gosipụta ya n'ụzọ bara uru, dị mkpa. Microdata bụ akara mkpado, ewepụtara na HTML5, na-enye gị ohere ịme nke a.
Schema.org, Gini bu MicroData?
N'ezie, ọ dịghị nke ndị a na-chọrọ… ma m ukwuu nwere ike ikwu na ha. Mgbe ịkekọrịta njikọ na Facebook, dịka ọmụmaatụ, ọ nweghị onyogho, aha, ma ọ bụ nkọwa na-abịa… mmadụ ole na ole ga-enwe mmasị wee pịa. Ma ọ bụrụ na gị na Schema snippets anọghị na ibe ọ bụla, n'ezie ị ka nwere ike ịpụta na nsonaazụ ọchụchọ… mana ndị na-asọ mpi nwere ike ịkụ gị aka mgbe ha gosipụtara ozi ndị ọzọ.
Debanye aha gị XML Sitemaps na Search Console
Ọ dị oke mkpa na, ọ bụrụ na ị wuru ọdịnaya gị ma ọ bụ ikpo okwu ecommerce, nke ị nwere usoro ntanetị nke na-egbochi injin ọchụchọ, na-ebipụta microdata, wee nye ezigbo saịtị XML maka ọdịnaya ma ọ bụ ozi ngwaahịa iji chọta!
Ozugbo faịlụ robots.txt gị, XML sitemaps, na snippets bara ụba na-ahaziri ma mekwaa ka mma na saịtị gị, echefula ịdebanye aha maka nyocha Search engine ọ bụla (nke a makwaara dị ka Webmaster tool) ebe ị nwere ike nyochaa ahụike na visibiliti nke gị saịtị na engines ọchụchọ. Nwere ike ịkọwapụta ụzọ Sitemap gị ma ọ bụrụ na edebeghị ma hụ etu igwe nyocha na-eri ya, ma enwere nsogbu ọ bụla na ya, yana ọbụlagodi otu esi agbazi ha.
Bipute ihe na-acha uhie uhie iji chọọ engines na mgbasa ozi mgbasa ozi na ị ga-ahụ ọkwa saịtị gị ka mma, ntinye gị na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ ahụ pịa karịa, peeji nke gị kesakwara na mgbasa ozi mmekọrịta. Ihe niile na-agbakwunye!
Olee otu Robots.txt, Sitemaps, na MetaData na-aru oru
Ijikọta ihe ndị a niile dị ka ịpịpụ kapeeti na-acha uhie uhie maka saịtị gị. Nke a bụ usoro iri ari nke bot na - esonyere otu igwe nyocha ihe eji achọpụta ọdịnaya gị.
Ebe nrụọrụ gị nwere faịlụ robots.txt nke na-atụkwa aka ebe XML Sitemap gị.
Usoro CMS gị ma ọ bụ ecommerce gị na-emelite XML Sitemap na ibe ọ bụla ma bipụta ụbọchị ma ọ bụ dezie ozi ụbọchị.
Usoro CMS gị ma ọ bụ ecommerce gị na-egbochi engines ọchụchọ iji mee ka ha mara na emelitere saịtị gị. Can nwere ike ping ha ozugbo ma ọ bụ jiri RPC na ọrụ dịka Ping-o-matic ịkwanye na njikwa isi ihe niile.
Ihe Nchọgharị Nchọgharị na-alọghachi ozugbo, na-asọpụrụ faịlụ Robots.txt, na-achọta peeji ọhụrụ ma ọ bụ emelitere site na saịtịmap, wee depụta peeji ahụ.
Mgbe ọ na-edepụta peeji gị, ọ na-eji snippet microdata bara ụba iji melite peeji nsonaazụ ọchụchọ ahụ.
Dika saiti ndi ozo di nkpa jikọtara na ọdịnaya gi, ọdịnaya gi di nma.
Ka ejiri ọdịnaya gị na mgbasa ozi mmekọrịta, ozi bara ụba nke akọwapụtara nwere ike inyere ezigbo nyocha ọdịnaya gị wee duzie ha na profaịlụ mmekọrịta gị.
Tags: omenala ecommerceotúprotocolfaịlụ robots.txtatụmatụnjikwa njikwaọkọlọtọ mapxml saịtị saịtị
5 Nkà na ụzụ Njikere Ndị Ahịa Digital Digital Echi Kwesịrị Masterkụzi Taa
Etu ị ga - esi bulie Azụmaahịa gị, Saịtị na App maka Ọchịchọ Apple
Nọvemba 3, 2020 na 3:47 nke ụtụtụ
webụsaịtị m enweghị ike ịdekọ ọdịnaya ọhụrụ, enwetara m sitemap na url na webmaster mana enweghị m ike melite nke a. Ọ bụ nsogbu google backend?
Nọvemba 3, 2020 na 7:50 nke ụtụtụ
Ọ bụghịkarị, gịnị bụ ngalaba gị? Enwere m ụfọdụ ngwaọrụ m nwere ike iji nyochaa saịtị gị.